सुन्दरहरैंचा विराटचौंकका नूतन बने नयाँ मिष्टर नेपाल
इटहरीः ‘मिष्टर नेपाल वल्र्ड २०२२’ को उपाधि मोरङ सुन्दरहरैंचा विराटचौंकका नूतन श्रेष्ठले जितेका छन् । शनिबार अबेर साँझ आयोजित फाइनल प्रतिस्पर्धामा २६ बर्षिय श्रेष्ठले ३५ प्रतियोगीलाईपछि उपाधि जितेका हुन् ।
विजेता श्रेष्ठले ५ लाख नगद सहित ‘मिष्टर वल्र्ड २०२२’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर समेत प्राप्त गरेका छन् । श्रेष्ठलाई यस अघिल्लो ‘मिष्टर नेपाल वल्र्ड’ विजेता डा. सन्तोष उपाध्यायले उपाधि हस्तान्तरण गरेका थिए ।
हयात रिजेन्सी होटलमा भब्य समारोहकाबीच आयोजित प्रतियोगीतामा पूर्व मिष्टर नेपालद्वय डा. आयुष्मान घिमिरे र सन्दिप पोखरेल, पूर्व मिस नेपाल ईशानी श्रेष्ठ, अभिनेत्री रिचा शर्मा, संचारकर्मी एवं अभिनेता सुरज सिंह ठकुरी तथा फोटोग्राफर राज भाई सुवाल निर्णायकको रुपमा रहेका थिए ।
प्रतियोगीतामा कुशल नहर्की पपुलर तथा एक्टिभ, डा. सुनिल खरेल पब्लिक च्वाइस, जीवन गिरी पर्सनालिटी, विकास गमाल ट्यालेन्ट, विशाल कट्वाल फोटोजेनिक, मानस घले फिजिक तथा प्रसन्न राई स्टाइल आइकन विधामा उत्कृष्ट ठहरिए ।